ကျွန်တော့်အိမ်: စိုင်းထီးဆိုင်၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
ရေးသားသူ Tea at 7:51 PM
စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းတွေစုစည်းထားတဲ့ အတွက် အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကိုထီးပရိသတ်ပါ။
ခွင့်ပြုချက်မရခင် နားထောင်ချင်လို့ ကျွန်တော် အိမ်ကို ယူထားလိုက်ပါတယ်။ ဒိထက်ပို အကျိုး ဆောင်နိုင်ပါစေ
Wowww!! 500?? :) Amazing
Thank you so much for this. I have been looking for Ko Hti's songs.
ဒေါင်းလုဒ် လင့်ခ်လေးတွေပါတင်ပေးရင် ပိုအထာကျမယ်ဗျ.. အားရင်လုပ်ပါလား ကိုတီးရေ...
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုထီးရဲ့အသံနဲ့အိပ်ခဲ့ရ
ပါတယ်။အသိနောက်ကျလိုက်တာဗျာ။ပြည်ပကိုရောက်မှ ကိုထီးရဲ့ သီချင်းများနဲ့ တွေရတာ နောက်မကျသေးပါဘူးနော်။ကိုထီးတမလွန် ဘ၀က နေပြီး
ကိုယ်ထီးရဲ့ သီချင်းသံ ကိုဆိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ အတွေး အရေး တို့ဟာ ကျုပ်တို့လိုလူငယ်များအတွက်တကယ် ခွန်အားတွေပါ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
နောက်ပြီး ကျုပ်တို့ခေတ်ရောက်နေပြီ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် အလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ကျိုးစားကြမယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့နုိုင်ငံမှာ
အခုလိုလုပ်ပေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။mp3အတွက်ဒေါင်းလုဒ်လင့်ကလေလုပ်ပေးပါလာ အားလုံးမျှဝေခံစားလို့ရအောင်လိုပါ။ ကိုထီးရဲ့ထာဝရပရိတ်သက်တယောက်